Gareth Bale oo Real Madrid goolkiisii ugu horeeyay u saxiixay & Inter Vs Juventus oo is mari waayay (Faaqidaada La Liga+Serie A) !!‏ | Salaan Media
Gareth Bale oo Real Madrid goolkiisii ugu horeeyay u saxiixay & Inter Vs Juventus oo is mari waayay (Faaqidaada La Liga+Serie A) !!‏
* Horyaalka dalka Spain ee La Liga oo la ciyaaray kulankiisii 4-aad ayaa waxaa goolkiisii ugu horeeyay u saxiixay kooxdiisa Real Madrid ciyaaryahan Gareth Bale oo dhawaan laga soo baxshay aduun gaaraya 100 Milyan oo Euro.
Kooxda Real Madrid oo aaday guriga naadiga Fc Villarreal waxa ay isla dhaafi waayeen bareejo 2-2 ah waxaana Real Madrid labada gool u kala saxiixay laacibiinta kala ah Gareth Bale iyo Cristiano Ronaldo. Dhanka kooxda Villarreal waxaa goolasha u kala dhaliyay ciyaaryahan Cani iyo Giovonni Dos Santos.
Fc Barcelona oo garoonkeeda ku qaabishay naadiga Fc Sevilla waxaa bad baadiyay dhamaadkii ciyaarta weeraryahanka Qaranka Chile Alexis Sanchez oo goolkii guusha u saxiixay (daqiiqadii 94-aad). Kulankaan oo 3-2 ku dhamaaday waxaa 2 gool ku hor martay kooxda Fc Barcelona waxaana u kala saxiixay laacibiinta kala ah Dani Alves (daqiiqadii 36-aad) iyo Lionel Messi (daqiiqadii 75-aad) . Goolasha kooxda Fc Sevilla waxaa u kala dhaliyay xiddiga reer Croatia Ivan Rakitic (daqiiqadii 80-aad) iyo ciyaaryahan Coke (daqiiqadii 90-aad).
Horyaalka dalka Spain ee La Liga oo la ciyaaray kulankiisii 4-aad waxaa min 12-dhibcood ku wada hogaaminaya kooxaha Fc Barcelona iyo Atletico Madrid oo wada badiyay dhamaan afartii kulan ee la ciyaaray. Waxaa kaalimaha 3-aad iyo 4-aad ku kala jira Real Madrid iyo Fc Villarreal oo min 10-dhibcood wata.
*** Dhanka horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A oo la ciyaaray kulankiisii 3-aad waxaa is mari waayay kooxaha Inter Milan Vs Juventus oo bareejo 1-1 ah isku macsalaameeyay. Inter Milan oo ku ciyaareeysay garoonkeeda ayaa kulankaan Gool ku hormartay waxaana u saxiixay daqiiqadii 72-aad ciyaaryahan Mauro Icardi balse 3 daqiiqo ka dib waxaa Juventus goolka bareejada u dhaliyay xiddiga Qarank Chile Arturo Vidal.
Bareejada labadaan kooxood waxaa ka faaideeysatay kooxda Napoli oo naadiga Atalanta ku tuntay 2-0 ka dibna hogaanka horyaalka Talyaaniga ku qabatay 9-dhibcood oo nadiif ah . Juventus iyo Inter Milan oo kaalimaha 2-aad iyo 3-aad ku kala jira ayaa leh min 7 dhibcood waxaa 4-dhibcood wadata naadiga Ac Milan oo bareejo 2-2 ah la soo gashay kooxda Fc Torino.